Usuku My Pet » 12 Amathiphu Ukuze Stay Upbeat Uma Dating Online
Igcine ukubuyekezwa: Oct. 28 2020 | 4 imiz ufunde
Dating Online ngezinye izikhathi uzizwe eyonakalisayo kakhulu. Kungabangela ukuba azizwe ngomlilo, ekhungathekile futhi imbala. Ngakho ingabe ugweme kanjani lokhu futhi enze esikhundleni ukuphola online zibe isipiliyoni kunomoya futhi kumnandi kungaba? Nanka amathiphu for wena.
– Yamukela ukuthi uya ukuhlangabezana eziningi abantu inthanethi ukuthi ngeke kube yini oyifunayo. Yilokho emihle! Kuyingxenye the deal. Ungapheli masilahle uma izibalo afinyelele emakhulwini (Angikhulumi wathi lokhu ukungethusa wena futhi kungaba sifinyelele lo okusezingeni uma ubale zonke e-mail). With ukuphola online khona INGABE eziningi imiyalezo futhi emuva naphambili. Yamukela it futhi ngeke kukuphatha.
– Have izinhlelo zokubhekana e-mail oxhumana. Lokhu kungasiza wena ukuvimbela zishe futhi uhlale eyashukumisela. Ngangivame ukuba e-mail standard ukuthi ngingathanda sebenzisa for nabantu engayala nje ukujwayela kancane kuye ngomuntu ngamunye ngase ngokuxhumana. Ngiyazi lokhu kwathathwa njengosongo engenabuntu, Empeleni kwaba nje kuyindlela ephumelelayo ukuphatha inqubo futhi uhlale energy okusezingeni. Emva ziye zachitha amahora ukuthayipha ephelele e-mail kuphela ukuba mpendulo (aphinde), uzoqonda ukuthi kungani I asikisela lokhu. Ungase futhi ube amafolda ezahlukene kulo ubeka abantu kuye ukuthi uyathanda noma cha.
– Gcina e-mail initial short. Angikhulumi esikisela ukuthi ungakhathazeki ukuba azi abantu, kuphela ukuthi ugcine e-mail kokuqala pretty short ngenkathi wena ukuhlolwa kwabo. Uma ngemuva eziningana e-mail short nobabili namanje nesithakazelo futhi ukukhuluma ke ungaya a little ezijulile nabo. Lokhu kwenzelwe nje ukuba ukuvimbela zishe futhi uyiphatha uma uthola eziningi e-mail nesithakazelo.
– Yisa 'mathupha' noma ngocingo ngokushesha. Ngokusobala ugcine ukuphepha engqondweni, futhi Ngikhuthaza amaklayenti ami ukuya usuku ukuphila kwangempela ngokushesha. Lokhu kungenxa yokuthi abantu kungaba okuhluke kakhulu ekuphileni kwangempela banjani inthanethi, futhi ngeke wazi uma uya khona ofanelekayo uze uhlangana nabo ekuphileni kwangempela. Ukuze lesi sifiso ungachithi amahora imibiko emuva naphambili online, kungenjalo ngeke zadlala a lot of time on abantu okungenzeka ukuthi zifaneleke kuwe.
– Ungakhathazeki uma ungatholi ngezimpendulo e-mail oyithumelayo. Uma lokhu kwenzeka kuwe ngiyazi ukuthi kungaba ngidabuke futhi aphinde ungayithathi ngokwakho. Ngezinye izikhathi sonke zidlule kokomisa lapho sithola LUTHO. No izimpendulo kunoma of the e-mail sithumela, akukho oxhumana nokunye. Ungethuki uma lokhu kwenzeka kuwe, Nokho kuwufanele ukuthatha elinye look at mgomo lokho kubhalwe profile yakho futhi izithombe oye posted. The tone of profile yakho kufanele nakanjani kube nobungane, ukukhanya nokujabula. Uma namanje abangenalo luck uma bahlolwe profile yakho, cela umngane omethembayo ukubheka kuyo bakunike ama-feedback ezinye. Ngisho babe nabo hlola phezu ezinye imiyalezo usuke ethumela ukuze uqinisekise ukuthi ufunda OK.
– Ngomqondo ofanayo uma kukhona umuntu wesifazane usuke zilindele ukuthola eminye imiyalezo futhi akukho okuza ngokusebenzisa, aphinde ningakhathazeki. Funda bese ulandela isinyathelo ngenhla. Futhi phawula ukuthi lokhu endaweni eyodwa ukuthi I asikisela abesifazane kungaba amandla abo wesilisa, nje lesi sinyathelo sokuqala. Lokho I mean by lokhu phambili oqalayo ngokuxhumana futhi imiyalezo nabantu oyithandayo. Online dating sites kungaba kakhulu 'ezinomsindo' futhi ungakwazi ulahleke shuffle uma ungawenzi phambi kwakho aziwayo. Sebenzisa amandla akho wesilisa ukuze uxhumane nabantu futhi uthole izinhlelo zakho endaweni, bese uphonsa ilungelo emuva zibe amandla akho njengabesifazane kanye zokuxhumana isiqalile.
– Ungathathi ngokwakho uma ayanyamalala. Sike ukube kwenzeke. Uhlangana nomuntu online, wena chatting nabo, konke kuhamba kahle, akha kamnandi, wena ngisho besebenza mhlawumbe kuze ecela usuku, bese kungazelelwe 'POOF' baba ingaphela in a ifu intuthu, never wababona. Ingabe wena uthi into awful? Ingabe zifa? Well Cishe. Cishe nabo ukukhuluma nabanye abantu inthanethi, futhi lathola khona kuqala, noma mhlawumbe ex babo ukuthi babezimisele namanje ngasese in love with wabonisa emuva up futhi kwadingeka a lucky Ukuphunyuka. Iphuzu cishe ngeke azi. Futhi lokhu kwenzeka sonke isikhathi! Uma wazi lokhu kuyasiza thatha udosi out of it. I njalo ukweluleka abesifazane zami amaklayenti hhayi ukuba uthole uhileleke kakhulu ngokomzwelo, uze wahlangana empeleni naye ekuphileni kwangempela, futhi eqinisweni aze obonisa wena ufuna sina kuwe. Kuze kube yileso sikhathi nguye option esisodwa kini kwabaningi. Ungathathi 'anyamalale' uqobo.
– Mhloniphe konke nge ingcosana kasawoti. Dating Online yilokho kuba. Futhi uma ungakwazi ukusamukela lokho kuyinto uzoba nesikhathi lula kakhulu nalo. Uzothola ezinye oddballs, uzothola abanye abantu ocabanga kukhona awful, uyobe mhlawumbe ukuhlangabezana abanye abantu oyithandayo futhi mhlawumbe uzothola nomuntu ungaba nobuhlobo futhi ukuthandana nabantu. Nokho yikuphi okunye kuba, kuyoba okuhlangenwe nakho. You luyokhula njengoba umuntu ngenxa yaso bese uthola ukuzijayeza uxhumana amalungu nabobulili obuhlukile. Ngakho ungadikibali in, nje qiniseka ukuthatha it ingcosana kasawoti, ukuhleka nabangani bakho ngakho futhi ukuzijabulisa nalo endleleni.
Ingabe Ukukha The Partners Wrong?
Five Tips On indlela A Usuku Blind